ကိုယ်ဝန်အရင့်မာကြီးနဲ့တောင်မှ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်က ရိုင်းစိုင်းစွာ လာဆဲခဲ့တာကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အိအိတုန် – Suehninsi
အိအိတုန်ကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိအိတုန်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အိအိတုန်က ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေပြီး
အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။ “ဒီလိုပလိန်းကြီးတွေ message လာလာပြို့ပီး အဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တည်း လာလာဆဲနေတာ ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ? ဗိုက်ကြီးနဲ့မို့လွှတ်ထားတာ ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ။ နာမည်ကြီးချင်တာလား? ဟိုဖုန်းတွေ block ထားတော့။ နောက်တစ်ဖုန်းနဲ့လာဆဲတယ်။ ဘာတွေမနာလိုဖြစ်နေတာလဲ အစ်မရယ်။ ကိုယ်တင်မဟုတ်ဘဲ အကုန်လာဆဲနေတော့ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ မှတ်လောက်အောင်
လုပ်ပေးရမလား ကျွန်မအကုသိုလ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ရှောင်နေတာ။ သရေဖျက်မှု ဘာပုဒ်မဆိုတာသိလား။ ကြည့်တာနဲ့သိသာပါတယ် ရေးထားတာကိုက အဆင့်မရှိတဲ့သူမှန်း။ ပလိန်းတွေကြီးလာဆဲနေတာ။ အစ်မရေ မနာလိုဖြစ်နေရင် လဲသေလိုက်ပါ။ ဒီထက်ကျွန်မကပိုအောင်မြင်မှာမို့လို့လေ။ အခုတင်တာက အယ်မ ဖုန်းလူသိပြီး ကျွန်မထဲကစုံထောက်တွေလိုက်လို့ရအောင်ပါ။ မလုပ်ချင်လို့သာ မလုပ်သေးတာ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုက်တာနဲ့
ဘယ်သူဆိုတာ တန်းသိမယ် ဆိုတာ သိထားလိုက်ပါ။ ” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ အိအိတုန်ကတော့ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရချိန်မှာ အခုလို အကြောင်းမရှိ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေသူအကြောင်း အားလုံးသိအောင် ချပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အိအိတုနျကို ပရိသတျကွီးအားလုံး သိပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ အိအိတုနျကတော့ အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး သမီးလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပွီး အခုလကျရှိမှာလညျး ဒုတိယမွောကျရငျသှေးလေးကို လှယျထားရပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အိအိတုနျက ဘယျကမှနျးမသိတဲ့လူတဈယောကျကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈနရေတဲ့အကွောငျးကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနပွေီး
အခုလိုပဲပွောလာပါတယျ။ “ဒီလိုပလိနျးကွီးတှေ message လာလာပွို့ပီး အဲ့မိနျးမတဈယောကျတညျး လာလာဆဲနတော ဘာဖွဈခငျြနတောလဲ? ဗိုကျကွီးနဲ့မို့လှတျထားတာ ဘာဖွဈခငျြနတောလဲ။ နာမညျကွီးခငျြတာလား? ဟိုဖုနျးတှေ block ထားတော့။ နောကျတဈဖုနျးနဲ့လာဆဲတယျ။ ဘာတှမေနာလိုဖွဈနတောလဲ အဈမရယျ။ ကိုယျတငျမဟုတျဘဲ အကုနျလာဆဲနတေော့ ဘာဖွဈခငျြတာလဲ မှတျလောကျအောငျ
လုပျပေးရမလား ကြှနျမအကုသိုလျဖွဈမှာစိုးလို့ရှောငျနတော။ သရဖေကျြမှု ဘာပုဒျမဆိုတာသိလား။ ကွညျ့တာနဲ့သိသာပါတယျ ရေးထားတာကိုက အဆငျ့မရှိတဲ့သူမှနျး။ ပလိနျးတှကွေီးလာဆဲနတော။ အဈမရေ မနာလိုဖွဈနရေငျ လဲသလေိုကျပါ။ ဒီထကျကြှနျမကပိုအောငျမွငျမှာမို့လို့လေ။ အခုတငျတာက အယျမ ဖုနျးလူသိပွီး ကြှနျမထဲကစုံထောကျတှလေိုကျလို့ရအောငျပါ။ မလုပျခငျြလို့သာ မလုပျသေးတာ ဖုနျးနံပါတျကိုလိုကျတာနဲ့
ဘယျသူဆိုတာ တနျးသိမယျ ဆိုတာ သိထားလိုကျပါ။ ” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။ အိအိတုနျကတော့ ကောငျးရောငျးကောငျးဝယျ လုပျကိုငျစားသောကျနသေူတဈယောကျဖွဈပွီး လကျရှိမှာလညျး ဒုတိယမွောကျကိုယျဝနျကို လှယျထားရခြိနျမှာ အခုလို အကွောငျးမရှိ ဆဲရေးတိုငျးထှာနသေူအကွောငျး အားလုံးသိအောငျ ခပြွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။